Smart signal flash automatique LED light helmet VE502
IOS APP namboarina sy Android APP manazava ny fisehoana LED / COB Light
Jiro famantarana miorina hamolavola endrika iray.
Ampifandraiso amin'ny Bluetooth ny fitaovana marani-tsaina hahatratrarana ny asa tiana
Amboary ny endri-teknolojia sy ny fiarovana mialoha.
Weatherproof amin'ny alàlan'ny elektronika voaisy tombo-kase.
Karazana vokatra Sarom-bolo maranitra
Laharana maodely Smart fiarovan-doha VE502
TECHNOLOGY LED + EPS + PC in-bobongolo
endri-javatra famolavolana rivotra, rivotra mahery vaika, lohany fampiononana, famolavolana lamaody
Manitatra safidy APP namboarina miaraka amin'ny fampisehoana LED
Amin'ny maha-mihoatra ny 15 taona niainantsika ny ekipa R&D fiarovan-doha sy ny fanamboarana, ny fiarovan-doha hendry dia namboarina manokana iOS APP sy Android APP miaraka amin'ny hazavana hahafahana mitaingina azo antoka kokoa ho an'ny mpanjifa. Ny endrika matevina amin'ny fiarovan-doha hendry dia miteraka fomba manintona. Ny LED / COB ao anaty bobongolo dia misy teknolojia vaovao sy fanabeazana mandroso. Ny fiarovan-doha marani-tsaina miaraka amin'ny APP, hazavana LED sy COB famantarana ao anaty lasitra, ireo faritra telo ampifandraisin'ny tsiro-nify manga, manamboatra ny fampisehoana amin'ny alàlan'ny APP sy ny jiro fanaovan-tsolika atolotry ny mpanara-maso izay misy koa ny hazavana vaky.
Niara-niasa tamin'ny ekipa R&D sy ny fizahan-toetra maro izahay, mino izahay fa ny fiarovan-doha hendry dia ny teknolojia mitarika natao hametrahana fiarovan-doha maranitra amin'ny sehatry ny indostria manan-tsaina vaovao. Ny endri-doha mety tsara dia manatsara ny fampiononana sy ny hery fampangatsiahana miaraka amina fonosana fandrakofana lehibe izay mitazona anao mahazo aina mandritra ny andro iray manomboka amin'ny maraina maraina ka hatrany amin'ny fihodinanao amin'ireo namana ho an'ny seho takariva. Ny satroka maranitra voamarina CE, CPSC ary AUS ho an'ny fiarovana tonga lafatra.
Ity rafitra sahaza ity dia manana toerana telo amin'ny fanitsiana mijidina, milina fanosotra mba hanitsiana ny fihenjanana amin'ny tànana iray ary vita amin'ny fitaovana malefaka sy maharitra izy io mba hialana amin'ny fahasimbana mandritra ny fanidiana azy. Ny rafitra azo esorina sy azo soloina dia manome fanitsiana tonga lafatra amin'ny fanamorana.
Teo aloha: E Scooter fiarovan-doha V10S
Smart helmet tsara indrindra
Fiarovan-doha maotera tsara indrindra
Helmet amin'ny bisikileta matanjaka
Sarety fiarovan-doha Skate sy Kids V01KS
Skate mitaingina fiarovan-doha V10BS